Mumakore maviri anokwana, Google ichabvisa yechitatu-bato makuki kubva kuChannel | Linux Vakapindwa muropa
Mumakore maviri anokwana, Google ichabvisa yechitatu-bato makuki kubva kuChannel
Munguva yeiyo 2019 edition yeiyo Chrome Dev Summit muSan Francisco, Google yakaburitsa chiono chazvino chewebhu, maakataura zvinhu zvinoverengeka, zvinosanganisira kuvandudzwa kweSandbox Yakavanzika, nharaunda yakachengeteka yezvinyorwa zvinodzivirira kuvanzika kwevashandisi.
Mune izvo chaizvo Google ronga kuvharira nzira yakajairika iyo makambani ekushambadzira kana masevhisi anotora mukana wekutevera vashandisi kubva paInternet mune yako Chrome browser. Ndokusaka mumakore maviri apfuura ichachinja mashandiro ewebhu, nepo kambani ichiedza kupindura kuzvikumbiro zvemushandisi zvakavanzika zvakanyanya.
Zano reGoogle nderekudzivirira vaparidzi veadware nemamwe masangano batanidza makuki kubva kubhurawuza rako kune mawebhusaiti asingashande. Uku kufamba kwakafanana neiyo Apple yakagamuchirwa muna 2017 mune yayo Safari browser.
“Muna Nyamavhuvhu, takazivisa chirongwa chitsva (chinozivikanwa seSecurity Sandbox) chekuvandudza nzira dzakasununguka dzekuvandudza zvakavanzika pawebhu. Chinangwa chedu cheichi chakavhurika sosi yekutanga kuita kuti webhu ive yakavanzika uye yakachengeteka kune vashandisi, uku ichitsigira vaparidzi. Nhasi tinoda kukuzivisa nezvezvirongwa zvedu uye kukumbira rubatsiro rwako kuti uwedzere kuvanzika kwewebhu kubhurawuza.
Kweanoda kusvika makumi matatu emakore, makuki akaiswa nemakambani asingazivikanwe pane angangoita ese webhusaiti vakawedzera kushambadzira paInternet.
Kune mhando dzinoverengeka semuenzaniso, zvikamu zvekiki zvinobvumidza vashandisi kuti vazivikanwe pawebhusaiti kuitira kuti shanduko dzese kana zvese zvasarudzwa zvezvinyorwa kana dhata zvavanoita pane rimwe peji zvichengetwe mundangariro kubva kune rimwe peji kuenda kune rimwe.
"Mushure mekutaurirana kwekutanga nenharaunda yewebhu, tine chivimbo chekuti nekuenderera mberi uchidzokorora uye nekupa mhinduro, nzira dzekuvanzika uye zvimiro zvakavhurika seSecurity Sandbox zvinogona kutsigira dandemutande rine hutano uye rinotsigirwa. »
Muenzaniso wakakurumbira weiyi mashandiro isarudzo yekutengera pane chero e-commerce saiti. Paunoshanyira peji rezvinyorwa uye sarudza zvinhu, iyo cookie chikamu chinorangarira izvo zvakasarudzwa kuitira kuti tswanda iine zvinhu zvawakasarudza kana wagadzirira kuenderera nekutarisa.
Kunyangwe paine dzimwe nzira diki dzemberi vamwe vasarudza kushandisa makuki sehwindo hombe kuburikidza nazvo vanogona kuziva kuti ndeapi mapeji ewebhu ari kushanyirwa nemushandisi. Kana urwu ruzivo rwakagovaniswa nevashambadzi, iyo data inobatsira kufungidzira kuti ndeapi ma ads munhu aachawana akakodzera.
Zvisinei, mumakore matatu apfuura, data kutyora uye mitsva yemitemo yekuvanzika muEurope neCalifornia yakatungamira mukuchinja kukuru mumakambani eInternet. Google yataura kuti kurambidzwa kwayo kutsva kunongoshanda chete kana dzimwe nzira Google yaanoona kunge yakavanzika-inoshamwaridzika.
Kana idzi nzira dzangosangana nezvinodiwa nevashandisi, vaparidzi, uye vashambadziri, uye isu takagadzira maturusi ekugadzirisa mhinduro, isu tinoronga kubvisa wechitatu-bato kuki rutsigiro muChannel.
Chero shanduko hombe kune yewebhu tekinoroji inoda kukosha kwakakura nevashandisi vewebhusaiti uye hazvisi kujeka kuti kana yakawandisa data revashandisi ingadzikise mitengo yekushambadzira kwepamhepo.
Chinangwa chedu ndechekuzviita mumakore maviri, asi isu hatigone kuzviita tega, ndosaka tichida iyo ecosystem kuzvipira kune izvi zvirevo. Isu tinoronga kutanga chekutanga Chiratidzo cheKutanga gare gare gore rino, kutanga neyekushandura metric uye kuenderera nekuita kwako.
Kunyangwe icho chinangwa chemakore maviri chiri chitsva, Chiziviso cheGoogle chave chiri kutarisirwa muindastiri kwemwedzi. Vanoongorora zvemari vanotarisira kushoma pamabasa avo ekushambadzira kubva kuGoogle, sezvo ichiunganidza mushandisi data mune dzimwe nzira dzakawanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Mumakore maviri anokwana, Google ichabvisa yechitatu-bato makuki kubva kuChannel
Iyo nyowani vhezheni yeVulkan 1.2 yakatoburitswa uye uku ndiko kuchinja kwayo